~ ဏီလင်းညို ~: ပွဲတော်ည
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 8:56 PM
ဒီကိုယ်တိုင်ရေး စာစုလေး တော်တော်ကောင်းတယ်..
ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းသော ပြီးပြည့်စုံသော..နှစ်သစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်..အကိုဏီး....
့happy new year ပါအစ်ကို။ နှစ်သစ်ကူးတောင် အလုပ်ကလည်းမပိတ်ဘူးလား အစ်ကိုရာ..။ ဒါပေမယ့် အလုပ်မှာလည်း ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပဲ အတိပြီးနေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
ငြိမ်းချမ်းသာယာသော ၂၀၁၀က လက်ကမ်းလို့ကြိုနေပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်..
" အဆိုးဆုံးကတော့ အရောရော အနှောနှောနဲ့ ငြိတွယ်စွာ ရှုပ်ထွေးတတ်ခြင်းများရယ် ပါပဲ " ... ဆိုတာလေးကိုတော့ သဘောတူမိတယ်ကိုလင်းညို..
့Happy New Year !!!!!
“လောကမှာသူများကိုအပြစ်ပြောဖို့ သူများအားနည်းချက်ကိုထောက်ဖို့ဆိုတာက အလွယ်ကူဆုံးအလုပ်ပဲ” ဆိုတာ မှန်တယ် အစ်ကို...
တစ်နေ့တစ်နေ့ လူတော်တော်များများဟာ (တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်မေ့လျော့နေလောက်အောင်) သူတစ်ပါးရဲ့ ပြစ်ချက်တွေကို ရှာဖွေရင်း၊ စိတ်ဝင်စားရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အဖိုးတန်အချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားတာ မသိကြဘူး....
“ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုဘယ်လိုတိုင်းရင် ကောင်းမလဲ” ဆိုတာတော့ ကျနော်လည်းခုချိန်ထိ အဖြေရှာလို့ မရသေးဘူး.......
ဟုတ်တယ် အစ်ကို နှစ်တစ်နှစ်ကတော့ ကုန်သွားခဲ့ပြီ၊ နှစ်သစ်ကိုလည်းရောက်လာခဲ့ပြီ...
ကျနော်တို့ရဲ့ ဆုတောင်းတွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေက ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြည့်ဝနိုင်မယ်ဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တာအမှန်ပါ...
ဒါပေမယ့် အစ်ကိုပြောသလို ဘာမှမရှိတာထက် တစ်စုံတစ်ခုရှိနေတာက ပိုကောင်းလို့ ဆုတော့တောင်းပေးလိုက်တယ်
“ကိုဏီလင်းညိုတစ်ယောက် မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံသော ပျော်ရွှင်စရာများနဲ့ အတိပြီးသော နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ...”
ဖတ်တဲ့သူ ရင်ထဲအထိ ရောက်လာတယ်...။
နှစ်တနှစ်ကတော့ သမိုင်းမတွင်ပဲ ပြီးဆုံးသွားပြန်ပေ့ါ အကိုရေ...
"နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာ ငါတို့တွေဟာ ဆုတွေတောင်းကြတယ်...၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ...၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ထားခဲ့ကြတယ်...။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာ တစ်ကယ် တမ်းမှာတော့ ငါတို့ရဲ့လက်တွေ့ဖြတ် သန်းရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိချင်မှ ရှိနေလိမ့်မယ်...။ "
ဒီစာပိုဒ်လေးလိုပဲ အမြဲတမ်း မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ ဆုတောင်းပြီး ပြက္ခဒိန်ရဲ့ နေ့ လ ရက်တွေကိုလည်း ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီပေ့ါ။ နောင် လာမယ့် နှစ်သစ်တစ်ခုမှာ ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်စေဖို့ ဆုတောင်းရင်း ၂၀၁၀ ကို ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
လူဆိုတာ ကိုယ့်နေရာနဲ့ ကိုယ် လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ
အစ်ကို ရေးလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေက ပြောင်မြောက်လှချည်လားဗျာ...
ဖတ်ရတာ အရမ်းကို ကောင်းတယ်... လူတွေရဲ့စိတ်ကို တကယ်ဖော်ပြနေပါတယ်ဆိုတာက လွဲလို့ ကျွန်တော် ဘာမှကို မပြောတတ်တော့ပါဘူး...
အစ်ကိုပြောသလိုပါပဲ အချိန်စက်ဝန်းက ပုံမှန်လည်ပတ်နေတာပါ...
လူတွေက အဲဒီစက်ဝန်းပေါ်မှာ လိုက်လည်ရင်း ကန့်သတ်ချက်တွေကို သတ်မှတ်နေကြတာပါ...ဒါပေမယ့် ဘာမှမရှိတာထက်စာရင် တခုခုရှိတာက ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ ကိုတော့ နှစ်သက်မိသွားပြီ..
နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်ကို
သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး ရေးထားတာ သဘောကျချင်စရာလေး...
စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းလေး..... နှစ်သစ်တင်မကပဲ တဘဝလုံး ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ လှိုက်လှဲစွာ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဟယ်...
ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ ကိုဏီလင်းညို... Happy New Year ပါ။ (မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်)
အခုမှရောက်ပြီးဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျာ သေသေချာချာ လေဆိပ်မှာတုန်းကလာခဲ့
သေးတယ် သေချာမဖတ်ဖြစ်ဖူး တကယ်ကောင်းကောင်းရေးတတ်တယ်
ပန်ဒိုင်းး) နောက်လဲလာခဲ့မယ်ဗျ ကျော်ခွရလို့ မန့်မရလဲ စီးဘုံးမှာအော်ခဲ့မယ်
နယူးရီးယားညအကြောင်းလေးက ဖတ်လို့ အတော်ကောင်းသဗျာ... စာထဲမှာတောင် မျောသွားတယ်...
ညီလေးရေ ခုမှရောက်ရတော့တယ်..အကိုလဲ ကျီးကန်းလားဇီးကွက်လား..ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာမှန်းမသိတော့ဘူး
ရေးထားတာ လေး ကောင်းတယ် ..
နှစ်သစ် မှာ မင်္ဂလာ မှာ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါ စေ ..
NAPPY NEW YEAR ..
အကျယ် ကြီး အော်သွားတယ် ..
နှစ်ကူးပြီးတာတောင် ကြာနေပြီ ..
အခု မှ ပြောရတာ သိပ်တော့ မလှ တော့ ဘူး ..
လက်စသတ် လူတွေတင် အတင်းပြောတတ်တယ် မှတ်တာ... အပင်တွေ ငှက်တွေလဲ ပြောတတ်သကိုး. ညောင်ပင်ကြီးဆုံးမတာလေးမိုက်တယ်။